Ukuphupha kwabaTyeleli Discover ➡️ Ukufumanisa kwi-Intanethi ▷ ➡️
Undwendwe luhlala luyinto entle. Ihlala izisa iindaba ezinomdla kwaye umbuki zindwendwe naye angabelana nazo. Iindwendwe ngabantu abatyelela abanye abantu ezibhedlele okanye kumakhaya abantu abalupheleyo, kodwa nabo baya kwimidlalo bhanyabhanya okanye kwikonsathi. Into abadibana ngayo nabatyeleli bamakhaya kukuba banxulumana nolindelo oluthile kunye notyelelo lwabo. Ababukeli bomdlalo balindele isithembiso senkcubeko, undwendwe ekhaya lulindele ukuphathwa kakuhle.
Iphupha malunga nendwendwe linokuzisa uvuyo olukhulu xa udibana kwakhona, kodwa lisenokungaphazamiseki. Usenokuthetha ngokungakhathali, kodwa incoko ekufuneka uyenzile inokuba nzima nayo. Iimvakalelo zakho zibalulekile kutoliko lwamaphupha.
1 Uphawu lwephupha «undwendwe» - ukutolikwa ngokubanzi
2 Uphawu lwephupha «undwendwe» - ukutolikwa kwengqondo
3 Uphawu lwephupha «undwendwe» - ukutolika kokomoya
Uphawu lwephupha «undwendwe» - ukutolikwa ngokubanzi
Ukuba umntu ufumana undwendwe ephupheni, oku kuyafana nokutolikwa kwephupha nesiganeko sokwenyani kubomi bokwenyani okanye uphawu lwephupha lunokubonisa Ukongezwa kusapho phantsi. Mhlawumbi ukuzalwa komntwana kuya kwaziswa ngohlobo lwendwendwe. Kodwa inokuba ngumyeni ozayo okanye uninazala. Ukuba umntu uneendwendwe ezininzi ephupheni, lo ngumqondiso wobunzima kunye neengxabano ekuchazeni iphupha.
Uphawu lwephupha lubonisa umntu ophuphayo ukuba kufanele ukuba nobuganga bokuthi hayi kube kanye kwaye acinge ngeemfuno zakhe. Kwakhona, ukufumana undwendwe olunye okanye nangaphezulu kunokuba sisilumkiso ekutolikeni amaphupha. Ukuphoxeka ukuba. Ukuphupha mhlawumbi kulindelwe kakhulu kukuhlangana.
Ukutolikwa kwamaphupha, kukwabalulekile ukuba ngubani undwendwe olo. Ukuba iphupha lityelelwe ngumhlobo, uphawu lwephupha lumele umsitho omnandi ozayo. Mhlawumbi sele unezicwangciso zohambo olonwabisayo okanye ukuphuma. Ephupheni kuza ulindelo kwinto ebonakalisiweyo. Nangona kunjalo, ukuba undwendwe luye luvuselele iimvakalelo ezingathandekiyo, abantu abakhohlakeleyo banokulugquma uvuyo.
Ukuba undwendwe ngugqirha, uphawu lwephupha lumele ukuchacha ngokukhawuleza ekuguleni okanye ekuguleni. Ukuba umphuphi ngokwakhe undwendwe ephupheni lakho, uphawu lwephupha lunokwazisa umbhiyozo wosapho. Nangona kunjalo, kuxhomekeke kutoliko lwamaphupha, inokukuxwayisa ukuba ngaphakathi kwesangqa sabahlobo bakho Ayilunganga Yenziwe kwaye kufuneka ulungele impikiswano kunye nomqobo kwizicwangciso zakho.
Uphawu lwephupha «undwendwe» - ukutolikwa kwengqondo
Ukusuka kwindawo yokujonga kwengqondo, "undwendwe" uphawu lwephupha luthetha lukhulu ngabo. izakhono zentlalo yokuphupha. Oku kuhlala kubonisa imeko eyiyo yokuphila. Ngokwenkcazo yamaphupha, ukwamkelwa kweendwendwe yintlanganiso apho kungekho kunxibelelana kuphela. Ngaphezulu kwayo yonke loo nto, umanyano lweemvakalelo phakathi kwabo babandakanyekileyo luyaqina.
Isimboli yephupha "undwendwe" lubonisa ukuvalelwa komphuphi, okwangoku ephantsi kwakhe Ukubekwa wedwa uyasokola. I-subconscious iveza umnqweno wayo wokuqwalaselwa kunye nokuqwalaselwa ephupheni.
Ukuba iphupha lithanda kakhulu undwendwe lwakho, uphawu lwephupha lubonisa ukuba ikwasetyenziselwa ukuthanda ubomi bokwenyani. Ngokwenkcazo yephupha, ukuphupha kuzama ukukhusela uthando ngale ndlela.
Kutoliko lwengqondo lwephupha, undwendwe ephupheni ngamanye amaxesha lubandakanya inxenye yobuntu ethi icinezelwe kubomi bokwenyani. Undwendwe ephupheni ikwangulo umhlaba, eyazisa utshintsho ebomini kunye nobudlelwane bephupha. Ukuba uyalonwabela utyelelo, wanelisekile kukuyilwa ngokutolikwa kwephupha.
Ukuba umanyano ludala iimvakalelo ezingathandekiyo, iphupha ngokungazi lizikhusela ngokuchasene notshintsho. Kule meko, uphawu lwephupha "undwendwe" lunokubhekisa kwinto ecinezelweyo. Ukuchasana yalatha kumntu othile. Iphupha, apho ukuphupha utyelela umntu, sisimemo sokwandisa ubude bomntu, nokuba kukwimo yokomoya okanye yokomoya.
Uphawu lwephupha «undwendwe» - ukutolika kokomoya
Endleleni yophuhliso lokomoya, uncedo lomntu kunye nenkxaso zihlala zifuneka. Isikhokelo somoya. Ukutolikwa kwephupha lokomoya, oku kubhengezwa kwisimboli yephupha 'undwendwe'.